Jiri arụmọrụ na-anọghị n'ịntanetị mụbaa arụmọrụ email Blog MarTech
Tuesday, January 25, 2011 Saturday, October 29, 2011 Michael Reynolds kwuru
Imirikiti ndị maara m maara banyere mmekọrịta ịhụnanya m Igbe mbata. Nke izizi mere ka ewu ewu Merlin Mann, Igbe mbata bụ usoro ijikwa ozi email gị ma debe igbe mbata gị. Ọ mara oke mma email arụpụtaghị sistemụ. Ewerewo m echiche ndị ahụ, megharịa ha ntakịrị, ma gbakwunye mpekele ọhụrụ ole na ole. Ana m akụzi usoro mmụta na arụpụta email kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na m bụ nnukwu onye ofufe, ọ bụghị mmadụ niile dị njikere ịnwa ịgbaso usoro niile na sistemụ Igbe mbata nke ezi. M na-ada n'ụgbọala ahụ ugboro ugboro ma na-agwa onwe m azụ n'ebe obi ụtọ email zen oge ụfọdụ.
Agbanyeghị, ọ dị otu usoro dị mfe site na sistemụ a ị nwere ike ime ngwa ngwa na ngwa ngwa, nke ga-eme ka ndụ dịkwuo mfe. A na-akpọ ya "ọnọdụ na-anọghị n'ịntanetị".
Imirikiti mmemme email ugbu a (dị ka Apple Mail, Outlook, wdg) nwere ntọala akpọrọ ọnọdụ anọghị n'ịntanetị. Mgbe atọrọ mmemme email gị na ọnọdụ adịghị n'ịntanetị, ọ nweghị ozi ezipụ ọ bụla a ga-ezute na igbe nnabata gị agaghị abawanye. Mgbe steeti a na-nyeere, ị bụ ugbu a free ka n'amaghị ama i scanomi, usoro, na zaghachi email enweghị mmetụta na-adọpụ uche site na-abata mail.
Echere m banyere nke a afọ ole na ole gara aga mgbe m na-efe efe. Ọtụtụ ụgbọ elu na-enye wifi ugbu a mgbe ha na-efe efe mana maka ọtụtụ akụkụ, ụgbọ elu na-apụta ịbụ onye a kwụsịrị kpamkpam. Aga m ewere laptọọpụ m n'ụgbọ elu ahụ wee malite ịhụ otu m si arụ ọrụ n'oge ụgbọ elu ahụ. M nwee ike zaghachi nza na nza nke email n'ihi na m na-adịghị adọpụ uche site na-abata ozi. Ọ na-atọ m ụtọ ịntanetị mgbe m rutere ma nụ “afọ!” nke ozi 50 na-ezigara ha otu oge.
Cingtụkwasị mmemme email gị na ọnọdụ offline na-eme ka otu ahụmịhe ahụ na arụpụta rụpụtara ma jiri mgbakwunye agbakwunye nke ikwe ka ị jiri web na ngwaọrụ ndị ọzọ n'otu oge.
Gbalịa nwalee a dị mfe: tupu imechi mmemme email gị, tọọ ya na ọnọdụ offline oge ọ bụla. Mgbe ahụ, mgbe ị mepere ya oge ọzọ, kwe ka ị zaa ma ọ bụ mezie ọtụtụ ozi ịntanetị dị ka ị nwere ike tupu ịtọghachi ya na ọnọdụ ntanetị. Debe nke a otu izu wee hụ ma ọ bụrụ na ịmalite ịchịkwa email gị nke ọma.
Ọ ga-amasị m ịnụ ihe ị kwuru n'okpuru!
Jenụwarị 25, 2011 na 8:37 PM
Nke a bụ ihe dị egwu! Arụsiwo m ọrụ ike iji nweta igbe efu, mana ha na-abịa! LOL Enwere m onye enyemaka ugbu a na-enyere aka na arịrịọ email / ajụjụ, mana na njedebe nke ụbọchị, ọ nweghị onye nwere ike ime ya ihe niile maka gị. Aga m anwale nke a lee ma ọ ga - enyere aka. Daalụ na nnukwu post Mr. Reynolds.
Jenụwarị 25, 2011 na 9:47 PM
Daalụ, Harrison! Mee ka m mara ka o si aga 🙂
Jenụwarị 27, 2011 na 8:17 PM
Gbanyụ nnata akpaaka bụ nke m, nke mbụ maka inyere mmadụ aka ịbawanye na email.
Nke a gbanwere email site na egwuregwu nke ndị mwakpo ohere (ha na-abịa!) Na egwuregwu nke solitaire (wepụta oge gị iji merie oche ahụ.)